किन बढ्दै छन् यौनकर्मी महिलाहरु, जिम्मेवारी कस्को ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
किन बढ्दै छन् यौनकर्मी महिलाहरु, जिम्मेवारी कस्को ?
पछिल्लो समय रोजगारीको लागी काठमाडौ धाउने संख्या दिन दिनै बढेको पाईन्छ । काठमाडौमा रोजगारीको व्यवस्था के कस्तो छ ? बुझदै नबुझी काठमाडौ भित्रने धेरै छन् । अरुको लहैलहै र बहकाउमा परेर काठमाडौ भित्रनेहरु भोलिको भविष्य के भन्ने सोच्नु आवश्यक छ । काम गर्न भनेर काठमाडौ भित्रने तर काम नपाइएपछि छाक टार्नै भएपनी धेरै जसो महिलाहरु यौनजन्य क्रियकलापमा लाग्न बाध्य भएका हुन्छन् ।
रोजगारीकौ लागी काठमाडौ पसेकी थिइन सिन्धुपाल्चोककी १९ बर्षीय सुनिता ,( नाम परिवर्तन ) तर उस्को आर्थिक आयआर्जनको बाटो भने त्यति सहज हुन सकेन । दुई बर्ष अघि कलंकीको एक खाजा घरमा रोजगरी गर्दै आएकी उनको सुरुको दुइ महीना जती सामान्य रहेको थियो । तर त्यस पछिको भोगाइ भने कहाली लाग्दो रहेको उनी बताउछिन् । उनले कामको खोजिमा धेरै ठाउमा धाएपनि भने जस्तो काम पाउन नसकेको ले उनले एउटा होटेलमा सामान्य काम गर्न थालिन सुरु सुरुमा उनलाई साउजीले पनि राम्रो गरेको थियो तर केही महिना पछि होटल साहुले जबरजस्ती ग्रहाक संग यौन सम्बन्ध राख्न बाध्य बनाएको उनी बताउछन् ।
यस्तै रोजगारीकै लागी भनी काठमाडौ आएकी रमीता (नाम परिवर्तन) उनको भोगाइ अलिफरक रहेको छ । धादिगं घर भएकी उनी तीन महीना अघी मात्र आफ्नो दिदिको सल्लाह अनुसार काठमाडौ आएकी थिइन । परिवारको आर्थिक स्थिति कमजोर रहेकोले घर परिवार प्रती कर्तब्यवोध गराएपछी रोजगारीको लागि उनी काठमाडौ आइन् । तर दिदिले नै केही पुरुष सगं यौन सम्बन्ध राख्न बाध्य बनाएको उनको गुनासो छ । दिदिकोमा रहदा बस्दा कहिल्यै दिदिले यसको बारेमा जिकीर नगरेको तर एकदिन अच्चानक आफुलाइ कोठामा बस्न भनिएको र त्यसको केही क्षणमै दुइजना पुरुषले जवरजस्ती गरेको उनि बताउछिन् ।
सुरुमा त आफुले प्रतिकार गरेको तर त्यस पछिका दिनमा भने दिदिको व्यवहार पनि उनिप्रति रुखो बन्दैगएपछि दैनिकी टार्नै भएपनि पेसागत रुपमा यस क्षेत्रमा लागेको उनी बताउछिन् ।
यस्ता धेरै महीलाहरु छन् जो यसरीनै यौन धन्दामा लाग्न बाध्य भएका छन् । यसरी बिना जा“चबुझ कुनै पनि कुराको जानकारी नलिएर रोजगारी पाइन्छ भन्दै काठमाडौ भित्रने क्रमले गर्दा धेरै महिलाहरु यौन हिंसाको सिकार बन्न पुगेका छन् । आफुलाइ यस्ता समस्याबाट बचाउन अब रोजगारीका लागि काठमाडौ भित्रनेहरुले सोच विचारका साथ अगाडी बढन सके आफुलाई सक्षम र सवल बनाउ सकिन्छ ।